RAVELOSON CONSTANT : ISIKA IZAO NO FANASIN’NY TANY – MyDago.com aime Madagascar
Na dia nisy aza ireo zanak’iDada lasa any Andranomanelatra, dia nisy ihany koa ireo izay manohy ny tolona eny an-kianja. Anisan’ny nanana anjara fitenenana teny amin’ny Magro Behoririka androany Andriamatoa Raveloson Constant.Isika 11 Jona androany hoy izy, ary afaka tapabolana ny 26 Jona. Raha miresaka izany 26jona Rajoelina dia aza adinoina fa misy ain-dehiben’ny filoha Ravalomanana ao. Misy antony hoy Constant, matoa mandrangarana vola hanaovana « bal » sodoma sy gomore, ary na dia fifanajana fotsiny ihany aza tsy tonga tamin’ny fanasan’ny FFKM Rajoelina. Mikasika ny ao Antsirabe dia nambarany fa aza gaga ianao Razandry, Razanamahazo, Rahajo raha mampiseho ny finiavany ny olona hiaro ny TIKO. Ny TIKO hoy izy dia namafy fitiavana ka hijinja fitiavana. Ny hoe fitiavana dia tsy fanodinana ny orinasa fotsiny fa fivelomany io. Noho izany dia aza ampitomboina ny alahelon’ny olona aminao.
Misy kolonely milaza fa ho rarafana grenady fa tsy raharahany izany. Fanontaniana no napetrak’ity mpanao politika, hoe fa misy inona ao amin’ny TIKO ao no lasa tanjona ara-miaramila ny ao ? ary iza loatra ity kolonely ity no milaza izany?. Tsara ho eritreretina izany fa mahatonga ny olona hanao vy very ny ainy. Mahatsiaro sahirana Rajoelina, hoy izy ary manao izay hahafoana ny kely eo am-pelatanan’ny filoha Ravalomanana, izay heverin’izy ireo fa io Antsirabe io no heriny. Niantefa tamin-dRajoelina ny teniny hoe mba henoy ihany fa mampiseho ny fitiavany ny vahoaka ary miteraka fahasorenana azy ny miaramila. Mikasika ny klioba Satanika dia nilaza Constant, fa vao niatomboka ny 2009 dia nitombo ny mpamono tena. inona hoy izy no mahagaga anareo raha misy izany, ary na any Vakinankaratra az no nisian’izany. Amin’izao fitondrana izao, izay tsy manam-panahy dia mandrobaka fahefana daholo ary mahazo mamono olona ka lasa mpanefoefo amin’ny anaran’ilay iray fotsiny. Rehefa manaiky azy hoy izy, dia afaka manosihosy amin’izay manohitra azy. Moa ve ka laviitra an’i Satana ny hoe rehefa manao loi d’aminstia dia sahy mijoro eo anoloan’ny parlemantera ny ministry ny ftsarana milaza fa atao tsy maty manota ny nandoro olona sy fananana.Ny ataontsika hoy Constant dia ny manala azy satria efa eo an-tampondohantsika ny satana. Isika no fanasin’ny tany ary hanadio izany satanika izany, ary ny fodian’ny filoha Ravalomanana no fanafodiny. Nanafatra ny vahoaka ny tenany, hoe manana tapabola isika koa ataovy manenina isan’andro Rajoelina izay miatdy ny hanemotra io fihaonana io. Asehoy azy fa tsy mendrika io kijorojoro amin’ny 26 Jona io.
Momba ny fihaonana eo amin’ny Filoha Ravalomanana sy Rajoelina dia nanambara Constant fa toy izyao ny karazan-kevitra mipoitra. Eo ilay manao hoe any ivenay noatao ny fihaonana, mbola tsy mihavana izany. Ireny mpisakana ny tsy hihaonany ireny hoy izy no milaza aminy fa rehefa miverina eto dia izao no ataonao. Midika izany fa mbola manao an-jorombala an-dRajoelina. Misy koa ny mandeha main’ilay hoe ataovy izay taoanareo fa izao « ni Ravalomanana ni Rajoelina » Ireo dia olona te hamarina any andavaka izay manao ny tsy hilatsahan’ny Filoha Ravalomanana. Misakana ny firenena tsy hanana filoha hiverina amin’ny laoniny toy tamin’ny 2008.Misy zana tolona volena eto hoy Constant, toy ny ao Antsirabe ka noho izany hatrehintsika ny tena raharaha any an-toerana ary ataovy eto Madagasikara ny fihaonana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 juin 2012 11 juin 2012 Catégories Politique
12 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT : ISIKA IZAO NO FANASIN’NY TANY »
Iza moa no nilaza fa sy mila an’i domelina sy dada raha tsy I vakitampona( raharinaivo)
izay efa fatam-poko ny maha JODASY lahy azy ka na i domelina namadiany an’i
dada aza efa navadiny indray koa.Io no mampasiaka ahy raha vao io resaka io no misy mandroso eto.
Koto fatsora!!!fanetribean’ny firenena koa raha ireny fa tokona ho kapaina.
Aoka Isika nanohana ny Filoha RAVALOMANANA MARC atrany am-boalohany hifantoka sy hitandro sy hitandro izany kirintsika miara-mitolona aminy hanaja sy hitia ny fahafahana ,ny fahamarinana , ny rariny ,ny hitsiny ary ny ara-dalàna ,izay fototry ny fiaraha-monintsika izay miezaka manala ny démocratie !
NY HEVITRA SY NY TETIKA TAINGITAINGINA SY HALA SAFAY SY VONJY TAVAN’ANDRO ARY LASAKO – VAVANY ( misehoseho sy mieboebo ary bevava fotsiny manararaotra ny sarotra iainan’ny Vahoaka ary finaritra mandragitra ny samy Malagasy hisavorivory , hifandany amin’izay tsy hitondra fahatoniana sy fandriampajemana na amin’izay tsy ho mofo ).
AOKA ISIKA HIADY HO AN’NY ADY TSARA DIA NY FANARENANA NY TOEKARENA MBA HAHOMBY ISIKA
EO AMIN’ NY FANATSARANA NY MAHA OLONA ANTSIKA AMIN’NY LAFIM-PIAINANA REHETRA MIKASIKA NY MAHA – OLOMBELONA …!
Aoka koa ny « sasany », tsy hanamboatra « dosie » mba hanampenana ny « VAVAN’NY TENA MPITOLONA » ! Izany ve no atao hoe mpandàla ny ara-dalàna ?
Aiza ny maha kristianina, rahatoa ka fikafika sy lainga ary tetika maizina lava izao, no entina hamingànana, ny « TENA MPIARO NY ARA-DALÀNA » SY NY VAHOAKA ?
LA TERRE EST RONDE, LE MONDE EST PETIT, DE SURCROÎT MADAGASCAR OU PLUS EXACTEMENT ANTANANARIVO !
12 juin 2012 à 13 h 53 min
Ary tena lasa ry zareo MFM mafana indray no lasa mpanjaka ao Magro ao an! Azo lazaina aloha fa tafiditry ny MFM ny baolina tamin’ity indray mitoraka ity satria efa tena very tanteraka anie ry zareo MFM teo amin’ny sehatra politika e! Ireo mba mpikambana fahiny tao ami’ny MFM dia efa tsy hita popoka intsony. Naleon’ny maro niala tamin’izany antoko izany satria ireo mpitondra tao aminy (Manandafy sy Constant) dia tsy mahay afatsy ny manohitra, fa tsy mba manana tarigetra hanorina zava-tsoa. Tojo ny niriny izay mirahalahy ankehitriny satria i Magro dia toerana voahozona hanoherana. Izany hoe ireo mpiandany ao ami’ny Magro dia efa voasoratra fa hanohitra ary hatramin’ny farany izany ka ho mandrakizay. Tsapan’i Manandafy sy Veloson Constant ka io no mahatamana an-dry zareo ao, satria nyfanoherana no tena talen-dry zareo ireo. Koa hoy izahay hoe: mahareta hatramin’ny farany ami’ny fanoherana e! I Andry kely sy ny ekipa mahavita azy kosa dia mba ho ela fanapahana amin’ity fitondrana ity, mahaleova mahalasana e!
‘ty anga no satana mpanozona?
Olona mpigoka draomelina sy ny mpidaina ireny ry nao â ! Efa simba ny ati-dohany, ary ho boka atramin’ny taranany, ary tsy ho vanona mandrak’izay, ho doria Amen !
Fitsiriritanana, fialonana sy fankahalàna an’izay mahitsy, sy miasa ary mahavita zavatra, no mitondra ny lohany izay paokaty !
Entin’ity sain-dratsy dia mahavita mivaro-tena sy tanindrazana !
12 juin 2012 à 16 h 11 min
« Mamy Rakotoarivelo est remonté au perchoir, au CT » lu sur le site du TIM !
Angaha efa niantso sy nanome baiko Ingahy Ravalomanana hoe, EFA MAHAZO MIVERINA SY MIHIDITRA DAHOLO INDRAY IANAREO ? Toa betsaka ihany aloha no fantatra fa nijoro teo antokonam-baravarana ê !
Efa mandroso izany ny raharaha, ary hifarana ny krizy ?
Ka rahoviana izany izy no ho tonga, satria efa ela sy betsaka ihany izay daty naroson-dry zalahy izay ?
MBA OMEO KELY SOPAPA IZAHAY FA VERY Ê !!!
Vao naheno ny Ambassadaoro SudAf (efa nosoloina blanc)niseho télé aho io nilaza zavatra mikasika ny fihaonana.
Tsy dia afaka nanaraka izay voalaza aho,
fa TONGA SAINA nivaky volana ny tena raha mampitahy ny teo aloha: tsy haiko fakafakaina hoe par quel mécanisme fa toa tena facilement achetable – corruptible ny mainty hoditra!!
De miresaka izahay hoe « soa ihany fa TSY mainty ny attaché amerikana eto an-toerana @ izao »
C’est désolant, voire dégoûtant les genres Simao, Salomao, Chissano, …
Tsy mila azavaina aminao angamba ry HoAiza hoe, maninona no tsy revin’ny karana sy ny menasofina ny Prezidà Ravalomanana !
Ho lazaina ihany angamba mba ho fantatry ny rehetra. Satria tsy voavidin-dry zareo, tsy toa ireo mpanao pôlitika gasy rehetra ireo ! Tsy mahalala menatra, fa ny sasany aza dia « fier » ery !
Toe-tsaina tia-kely, lomorona !
Na merina na avy any antsiraka, dia nihinana avy eny amin’ny tanany daholo ! Indrindra fa ireo tsy mampiasa papiezenika ireo !
Tandremo Hoaiza a!!isika tsy mpanavakavaka an!!
nefa marina ny teninao fa @ ankapobeny dia izay E!!
sy haiko hoe maninona????noho ilay loko ve sa ny ao anatin’io loko ( mainty ) io mihintsy
no mareforefo azo ahodina moramora?????
Mba mahariko ry Kintana a!!ena ary fa dia manantena izay izahay fa ho tonga tsy ho ela Dadanay O!!!
izaho aloha tsy naheno feo nipitika mihintsy ny momba io FIDIRANA vaovao io indray an!!inona indray re e!!!
ho Koto sa ho Ikala???
ranavalona: ne me fait pas dire ce que je n’ai pas dit!
Izany racisme izany dia TSY MITOMBINA NY FAMPIASANA AZY fa indrindra raha isika samy eto Dago.
Ethnicisme no misy eto, ary ny tena tsy azoko dia nahoana no aggraver-na be koa io resaka io?
Soa fa teo Ravalo tsy nanisy sira na ny pitina aza tamin’izany mihintsy,
fa tamin-dRatsiraka tena nahasempotra.
Misy kosa ny atao hoe « noblesse d’esprit », (ry rajoelina aza lohan’andevom-bazaha)
ka rehefa mivoana amin’io, fa indrindra eo @ sehatra GOAVANA international dia
Za anie efa miteny hoe « l’on ne sait pas quel mécanisme, … » de izay no takatry ny sain-keliko!!!
De inona no nataon’itony représentants du continent africain: Ping, Simao, Salomao, …
Tena mandiso fanantenana nony tonga any am-parany, itony Chissano … Faly aho aloa fa niova loko ny ambasadaoro SudAf
Efa hita fa FRANCAFRIQUE dia mbola mifandetika ihany: Ny anay tany zamerika rehefa mifanehitra @ kkk dia miray hina dahol asiatique & afrikana ê!
Ireo afrikana ao frantsa ao mitolona miady ho an’ny tanindrazany bodoin’i FrancAfrika no mampamirapiratra ny tany niaviany, toa izany koa ry Nelson Mandela: efa rà ao anaty va lay zavatra????
HoAiza, tena HITAM-POKO ary HITAM-PIRENENA ny fitiavan’Ingahy Ravalomanana ny TANINDRAZANY ! Voaporofo tamin’ny zava-bitany !
Ny olona marivo salosana, tery saina sy tia kely ary be fialonana hoy aho atrany, dia mora vidiana amin’ny vary iray venty !
Tsy mahay manàja tena eo amin’ny lafiny rehetra, fa raha vao misy manome tsolotra kely dia hamidy atramin’ny fianakaviana ! Tolorana miliô dia mahavita mivaro-janaka mihintsy !
Mampalahelo ! Ireo « mpanelanelana » ireo dia torak’izany ! Io mission ataony io, dia vola be ny indemnités azon-dry zareo amin’io, ka izay hampi-tarazok’azy no ataony ! Mihiditra ny vola, sahady amin’izay koa mbola misy manome « kado » LELA-vola sy natiora (tsy dia haiko ny mandika ny hoe « en espèces et en nature » ) !! hi hi hi !!
Précédent Article précédent : TIKO Andranomanelatra : tonga maro ny zanak’i Dada
Suivant Article suivant : MAGRO BEHORIRIKA : AZA MANAIKY ATAO TSINDRIO FA LAVO ISIKA